Ogaden News Agency (ONA) – Kobaca Dhaqaale Ee Maraykanka oo Hoos u Dhac Dhaqaale Ku Yimid.
Kobaca Dhaqaale Ee Maraykanka oo Hoos u Dhac Dhaqaale Ku Yimid.
Posted by Wariye Qaran	/ May 31, 2018
Kobaca dhaqaalaha Mareykanka ayaa la sheegay inuu seddexdi bilood ee la soo dhaafay kobaciisa uu yahay 2.2% taasoo ka hooseyso qayaasti lagu waday inuu gaadho oo ahayad 2.3%.
Waaxda dhaqaalaha Mareykanka ayaa waxay Arbacada soo saartay warbixin dib loo habeeyey oo ku saabsan qayaasta kobaca dhaqaalaha dalka.
Waxayna warbixintu sheegeysaa alaabada la dhoofiyo, maalgashiga iyo lacagaha ay dadku ku bixiyaan adeegyada kala duwan iney hoos u dhaceen.
Rubaca koobaad ee sanad walba ayaa lagu sheegay in uu hooseyn karo balse dhaqaalyahannadu waxay sheegeen iney rubacyada kale ee sanadka ka harsan iyo bilaha soo socdaba kobaca dhaaalaha uu isa soo tari karo.
Marka la barbar dhigo rubaca koobaad ee sanadka 2017, cabbirka alaabada iyo aadeegyada gudaha Mareykanka waxay dejiyeen sicir bararki kobacoodana wuxuu ahaa 2.8%, taasoo ka dhigeyso kobci ugu badnaa tani iyo 2015-ka.
Warbixintu waxaa kale oo ay sheegeysaa sicir bararka dhinaca dhaqaalaha ka muuqda rubaca koobaad ee sanadkan inuu yahay 2%.
Isticmaalka kharashaadka ee macamiisha waxay korodhay 1% oo keli ah, iyada oo saadaasha lagu waday iney gaarto 1.1%, taasoo ka dhigeyso kobacii ugu hooseeyey ee Mareykanka rubaca koobaad uu gaaro.
Kharashaadka lagu bixiyo dhismaha guriyaha iyo waxyaabaha kale ee udub dhexaadka u ahaa kobaca dhaqaalaha dalka waxay hoos u dhaceen 2%.
Hase yeeshee, waxaa kordhay dhaqaalaha dhinaca maalgashiga oo weliba ka sarreeyo halki lagu lagu waday inuu gaaro. Waxyaabaha hoos u dhaca dhaqaale kaalinta ku leh waxaa ka mid ah canshuurta dalka ee ahayd 35% oo laga dhigay 21%.